काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूहरूले ल्याएको बताएका छन्।
प्रचण्डले सत्तामा पुग्नैको लागि दुनियाका छोराछोरीलाई हिंसामा सहभागी गराएको र अलपत्र पारेको समेत उनले बताए।
“प्रचण्डलाई संवैधानिक बाटोमा डोर्‍याएर ल्याएको हामीले हो। उहाँ त सत्तामा पुग्ने सिँढी बनाउनका लागि दुनियाँका छोराछोरीलाई आवेश, उत्तेजनामा ल्याएर हिंसा मच्चाइरहनुभएको थियो। पछि दुनियाँका छोराछोरीलाई अलपत्र पारिदिनुभयो। स्याट्ट सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं उत्रेका दिनदेखि उहाँको अवतार परिवर्तन भएको होइन र?,” प्रधानमन्त्री ओलीले अज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने।
आजै प्रदर्शनी मार्गमा आयोजना गरिएको जनसभामा प्रचण्डले आपूmलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खेदेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले व्याङ्गात्मक शैलीमा दिए, “अघि मैले भाषण सुनें- संविधान ल्याउँ-ल्याउँ भन्ने यो प्रचण्डलाई किन खेदेको केपी ओलीले। संविधान ल्याउँ-ल्याउँ उहाँले भनेको रे, मलाई सम्झाएको रे प्रचण्डले।”
कठिन अवस्थाको सामान गरेर संविधान ल्याएको उनले बताए। अनेक शक्तिहरूले संविधान ल्याउन नदिँदा नदिँदै ल्याइएको उनले जनाए। अहिले संविधान कार्यान्वयनको कोसिस भइरहेको उनले बताए।
“संविधानसभाको चुनाव त गराइयो। संविधानसभालाई संविधान बनाउन नदिएर चार वर्षमा भंग चाहिँ कसले गरेको थियो, एकपटक सम्झिनुस् त। प्रचण्ड र बाबुरामले भंग गरेको होइन संविधानसभा? समाप्त पारेको होइन। फेरि मुस्किलले संविधानसभाको चुनाव गरायौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रकाशित: शुक्रबार, माघ ९, २०७७ २१:२६
“प्रचण्डलाई संवैधानिक बाटोमा डोर्‍याएर ल्याएको हामीले हो। उहाँ त सत्तामा पुग्ने सिँढी बनाउनका लागि दुनियाँका छोराछोरीलाई आवेश, उत्तेजनामा ल्याएर हिंसा मच्चाइरहनुभएको थियो।”
पछि दुनियाँका छोराछोरीलाई अलपत्र पारिदिनुभयो। स्याट्ट सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं उत्रेको दिनदेखि उहाँको अवतार परिवर्तन भएको होइन र?
संविधानसभाको चुनाव त गराइयो। संविधानसभालाई संविधान बनाउन नदिएर चार वर्षमा भंगचाँहि कसले गरेको थियो?